Mohamed Salah oo hoggaaminaya xiddigaha muhiimka ah ee Liverpool, kuwaasoo shaki laga gelinayo dib u bilaabashada horyaalka Premier League – Gool FM
(Liverpool) 08 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan saddex xiddig oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kooxda Liverpool ayaa shaki laga gelinayaa inay dheeli karaan kulanka dib u bilaabashada horyaalka Premier League, waxaana hoggaanka u haya Mohamed Salah.
Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay ka baqdin qabto taam ahaanshaha xiddigaheeda Mohamed Salah, Andrew Robertson iyo Georginio Wijnaldum ka hor inta aysan ku soo laaban ciyaarista Premier League.
Fursadda ay Reds ku hanan karto horyaalka ayaa sii socon doonta kaddib kulanka Merseyside derby ee ay la ciyaarayaan Everton 21-ka bishaan June, iyadoo wiilasha Tababare Jurgen Klopp ay u badan tahay inay hal guul oo kaliya ka helaan ku guuleysiga horyaalka Premier League.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Liverpool ayaa laga yaabaa inay ka maqnaadaan saddex ciyaaryahan oo furaha u ah kulankooda ugu horreeya ee dib u soo laabashada horyaalka, maadaama Jariiradda The Express ay soo warinayso in Salah, Robertson iyo Wijnaldum ay ka maqnaayeen tababarkii ugu dambeeyay ee naadiga.
Goolhayaha keydka ah ee Adrian ayaa sidoo kale ka maqnaa kulankii ay xiddigaha kooxda dhexdooda ciyaareen, inkastoo ay Liverpool wali kulan saaxibtinimo la leedahay Blackburn Rovers inta lagu guda jiro isbuucaan, taas oo fursad siineysa ciyaaryahan kasta si uu u caddeeyo taam ahaanshihiisa.
Kooxda Macallin Klopp ayaa 25-dhibcood ka sarreysa Manchester City oo ku jirta kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka Premier League, inkastoo Reds ay sagaal kulan u harsan tahay.
Kooxda PSG oo bedelka Thiago Silva ka raadinaysa horyaalka Serie A… (Waa kuwee daafacyada ay indhaha ku hayaan?)